Mitokona ireo infirmiera any Papouasie-Nouvelle-Guinée noho ny tsy fahampian’ny fiarovana amin’ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2020 7:29 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, Português, عربي, русский, English
Nanao hetsika sit-in tamin'ny 26 Martsa, 2020 ho fanoherana ny tsy fisian'ny fepetra sy ny fitaovana hiarovana azy ireo amin'ny COVID-19 ny Fikambanan'ny infirmiera any Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG).
Nametraka fihibohana mandritra ny roa herinandro ny governemanta ao PNG tamin'ny 23 Martsa mba hisorohana ny fihanaky ny aretina Coronavirus, ilay virosin'ny aretina COVID-19 mahafaty. Tamin'ny fotoana nanoratana, trangana COVID-19 iray ihany no hita tao PNG saingy olona miisa 3.000 no hitan'ny manampahefana fa “nisy fifaneraserana” tamin'ilay marary ary olona miisa 2.230 amin'izany no arahi-maso. Misy mponina efa ho sivy tapitrisa ao PNG.
Naneho ny ahiahiny ny Fikambanan'ny Infirimiera ao PNG tamin'ny 6 Martsa fa tsy manana trano mitokana hitsaboana ireo mararin'ny COVID-19 ny ankamaroan'ny hopitaly ary nitaraina momba ny fepetra tsizarizary momba ny fahasalamam-bahoaka izay natao hifehezana ny fihanak'ilay aretina izy ireo.
Nanamafy ny ahiahiny momba ny tsy fisian'ny fiofanana sy ny fomba fiasa mahomby eny amin'ny ambaratonga ifotony hiatrehana an'io aretina io ny Fikambanan'ny Infirmiera ao PNG taorian'ny fanambarana fihibohana.
Nanao taratasy fangatahana tamin'ny governemanta ny vondrona mba hanome fitaovana fiarovana manokana ho an'ny infirmiera (PPE), tamby amin'ny loza mety hihatra sy ny fivezivezena, sakafo ary fiantohana.
Rehefa tsy nahomby ny fifampidinihana dia nanao fitokonana tao amin'ny Hopitalibe Port Moresby sy tao amin'ny Tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana tao an-toerana ary tao amin'ny Hopitaly Hitsaboana ny Marary Saina Laloki any ivelan'ny renivohitr'i Port Moresby ny vondrona.
Nandritra ny fanazavana ho an'ny fampitam-baovao, nohazvain'ny vondrona ny fanapahan-kevitr'izy ireo :
Nanasongadina ny fitakian'ny infirmiera i Gibson Siune, sekretera jeneralin'ny vondrona :
Namoaka lahatsoratra nandrisika ny manampahefana momba ny fahasalamana mba hanatanteraka ny fanavaozana ilaina ny gazety Post-Courier:
Nanambara ny fitokonana ho ara-dalàna ny Sampan-draharahan'ny Asa sy ny Indostria. Nandritra izany fotoana izany, nanome toky ireo infirmiera ny governemanta ao PNG fa hapetraka ny fepetra fiarovana manerana ny firenena.
Ahitana taratra ny ahiahin'ny vahoaka amin'ny fiomanan'ny governemanta hamehy ny aretina COVID-19 ny fitokonana. Ankoatra ny fiatrehana ny fiantraikany ara-tsosialy sy toekarena amin'ny fihibohana mandritra ny roa herinandro dia vesaran'ny olana ara-bola ny rafi-pitsaboana ao amin'ny firenena.
Maneho ny zava-mahatsikaiky amin'ny fampiharana ny “fanajana ny elanelana” ao amin'ny firenena izay ahitana tsy fitoviana lehibe ilay mpanao gazety Scott Waide.